သင်ရိုးညွှန်းတမ်း အိပ်မက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » သင်ရိုးညွှန်းတမ်း အိပ်မက်
Posted by ၀င့္ျပံဳးျမင့္ on Mar 18, 2017 in Education | 20 comments
၄ တန်း မှာ ပြဌာန်းတဲ့ စာရိတ္တနှင့် ပြည်သူ့နီတိ ဘာသာရပ်ထဲမှာ ငါးပါးသီလအကြောင်း သင်ထားတယ်။ ငါးပါးသီလ လုံခြုံရေးအတွက်ပေါ့လေ။ တကယ်က ဟောဒီကမာ္ဘကြီးထဲမှာ ငါးပါးသီလ လုံအောင်စောင့်ထိန်းပြီး အသက်ရှင်ရပ်တည်လို့ မရဘူး။ အဲဒီ အမှန်တရား ကို မပြောတော့ ခလေးတွေကို မုသာဝါဒကြီး သင်ပေးထားတာပဲပေါ့။ မြန်မာစာဆိုရင်လည်း ဘုရားလောင်း မျောက်မင်းကြီး က ဘယ်လိုလုပ် လူစကားပြောမှာလဲ။ ဘာလို့များ ခလေးတွေကို ယုတ္တိဘောင်က ကျော်နေတာတွေ ၊ အလိမ်အညာတွေကို သင်မြဲသင်နေတာလဲ မသိဘူး။ ပုံပြင်ဆိုရင်လည်း ပုံပြင်လို့ ပြောပြီး သင်ရမှာလေ။
တကယ်တော့ မဟုတ်က ဟုတ်ကတွေကို သင်ရိုးထဲမှာ ဖျက်ပစ်လိုက်ဖို့ဆိုတာ လွယ်လွယ်လေး။ ထပ်ထုတ်တဲ့ စာအုပ်တွေထဲ မထည့်ရုံ။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ပြောင်းဖို့ ပြောရင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ ဘက်ဂျက် လိုတယ် ပြောဦးမှာပဲလား။ ဦးသိန်းစိန်ခေတ်က ခလေးတွေကို တစ်ယောက် မုန့်ဘိုး တစ်ထောင်ပေးတယ်။ ဝိုင်းအော်လိုက်ကြစမ်းဆိုတာ။ အခု အန်တီစုခေတ်မှာ ခလေးတွေကို ကျောင်းဝတ်စုံ တစ်စုံစီပေးတယ်။ ဘာတွေများထူးနေလဲ။ အရေးကြီးဆုံး သင်ရိုးညွှန်းတမ်းက ဘယ်တော့ပြောင်းမှာလဲ။
ကိုယ်ပိုင်တွေးခေါ်တတ်ဖို့၊ ကြက်တူရွေးနှုတ်တိုက်ဘွက လွတ်ဖို့၊ Team Building အတွက် Group ဖွဲ့တတ်ဖို့…အများကြီး အများကြီး..
UK exam တွေ ေြဖြေတဲ့အချိန်မှာ ဆုကြက်တူရွေးတွေက အတော်လေး ဒုက္ခပေးခဲ့တာ…
စကြုံတဲ့အချိန်တုန်းကဆို… ဘာစာက စကိုင်ရမှန်းမသိနဲ့ ေယောင်ဝါးဝါးအတော်ဖြစ်သွားခဲ့သေးတာ..
ပညာရေးစနစ်ပြောင်းလဲဖို့က အမြစ်ကစ လှန်ပစ်မှ ရမယ်..
အဲလောက်ထိ မြင့်မြင့်ကြီး အရင်မလုပ်ခင် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းထဲက ဘုရားလောင်းအမည်ခံပြီး ရေးထားတာတွေ အရင်ဖြုတ်ပစ်လိုက်ချင်တာရယ်။ လုပ်နိုင်တဲ့ လွယ်လွယ်လေးကို ဘူမှ မလုပ်ကြတာ။ အရင် မတို့ခတ်တုန်းက ပထဝီ၊ သမိုင်း၊ ဒါပဲ သင်တယ်။ ဦးသိန်းစိန်ခေတ်မှာ လူမှုရေးဆိုပြီး ပထဝီ၊ သမိုင်း၊ ဘဝတွက်တာ၊ ပြည်သူ့နီတိ ဆိုပြီး သင်တာမှာ။ ဘဝတွက်တာ ကောင်းတယ်။ ပြည်သူ့နီတိ အလကားပဲ။ ခလေးတွေခေါင်းထဲကို မဟုတ်တာ ရိုက်ထည့်တာ ကြောက်ဖို့တောင် ကောင်းတယ်။ ပြည်သူ့နီတိထဲမှာ ငါးပါးသီလက စပြီးသင်တာတွေ ဖြုတ်ပစ်လိုက်ချင်တာရယ်။
အခု အမေစု လက်ထက်မှာ ပညာရေးစပြောင်းတာက အတန်းတွင်းမှာ အဆင်ေ့ပးစံနစ် စပြောင်းတယ်။ အဆင့် ၁ ၂ ၃ ၄ မပေးတော့ဘဲ။ အေ၊ ဘီ၊ စီ၊ သုံးမျိုးပဲ ပေးတော့တယ်။အဲဒါလေးတော့ သဘောကျတယ်။ အပြိုင်အဆိုင်စိတ်၊ မနာလိုစိတ် လျော့ကျသွားစေတယ်။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကတော့ သုံးမရသေး။
ကင်းကောင်နတ် အင်္ဂလိပ်လို နှာပန်းလုံးခြင်ထှာ
ကျတော့်အယူအဆ က ပြောင်းတယ်ဆိုတာ
ပြောင်းပြန်တင်မက ချောင်ထဲထိ ထိုးခွေပစ်လိုက်တာမျိုး။
ခုခေတ်တွေ မှာတော့ ပြောင်းတယ်ဆိုတာ ပြင်တာ
နုတ်တာ ဖြည့်တာ ။
ဘယ်တော့မှ မပြောင်း သို့ ဖက်ဒရယ်ရ မှ ပြောင်းမည်။
ပြောင်းချင်ရင် သိပ်မခက်ပါဘူးနော်။ ခြေဥ တောင် ပြောင်းလို့ရတယ်။ အရင်လို ဒုံရင်းပြန်မရောက်ခင်လေး သင်ရိုးထဲက ဘရိန်းဝပ်တွေ ထုတ်ပစ်လိုက်နိုင်ချင်တာ။
သူ့ဝန်ကြီး သူ့လူတွေကလဲ …. မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ…
တခါတခါ လွယ်လွယ်လေးကို ဘာလို့ ဒီလောက်ခက်နေကြလဲ မသိဘူးနော်။ တံတားအမည်လေးကအစ၊ ဟိုဟာ ဒီဟာ အသေးအဖွဲလေးတွေကအစ။
ခုံမမက်ဖူးပြော..တက်လာသူတွေ.. မသိစိတ်က.. ခုံမက် သာယာနေကြတာပေါ့..။
အဲဒီတိရိစ္ဆာန်တွေ လူစကားပြော.. လူလိုတွေးတဲ့.. ၅၅ဝ အပါအဝင်.. ပုံပြင်တွေကို.. ဘုရာဟောလိုလိုလုပ် … လိမ်စားနေတာတွေရပ်ကိုရပ်ရမယ်..။
ကိုးကွယ်ရာဆိုတဲ့ဘာသာရေးနဲ့နွယ်ပြီး.. ရိုက်သွင်းတော့.. သံမှိုနှက်သလို စွဲကုန်ကြတာပေါ့…။
အဲဒီပညာရေးနဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့ လူတွေခမြာ.. နေရင်းထိုင်ရင်း.. တိရိစ္ဆာန်အဆင့်လောက်လိုက်တွေးနေရရော..။ တိရိစ္ဆာန်ခေါင်းထဲလူဦင်္းနှောက်ကြီးထည့်… လိုက်တွေးကြရော..။
ပုံပြင်ကို ပုံပြင်လို့သိပါစေ…။ ဘာသာရေးနဲ့ ကင်းပါစေ… ပေါ့..။
ဖြစ်နိုင်ရင်.. တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေက.. ကလေး.. လူကြီး.. ပညာရေးညွှန်းတန်း.. တိုက်ရိုက်တန်းသာကူး..။
အဲလိုလုပ်လို့.. နောင် အနှစ် ၄ဝ … မြန်မာပြည် ကမ္ဘာ့ ၁ကနေ ၁ဝထဲမဝင်ရင်.. ထိပ်တန်းမရောက်ရင်.. ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံဖြစ်မလာရင်.. လာဖြတ်လှည့်…။
သူကြီး နှစ် ငါး ဆယ် လောက် လုပ်ပါလား .. တော်ကြာ သူကြီး အသက်ရှိနေသေးရင် အဖြတ်ခံ နေရဦးမယ် ..ဘာဖြတ်ခိုင်းတာလဲ တော့သိဘူး …
ဟီး… နှစ်၄ဝလောက်ဆို.. မရှိလောက်တော့ပါဘူး..။
သိပ်မသေချာလို့.. ဘာဖြတ်ခိုင်းမှန်းမသိ.. ဖြတ်ခိုင်းထားတာ..။
သဂျီးပြောသလို ပြောချင်တာ။ တကယ်က ဘာဘက်ဂျက်မှ မလိုဘဲ လုပ်နိုင်တာတွေ ရှိတယ်။ သင်ရိုးပြောင်းတာပါပဲ။ နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်း စာအုပ်ရိုက်ထုတ်နေရမှာကို။ ဆရာတွေ ဆရာမတွေကို သင်တန်းပေးဖို့က နောက်မှ။ အဲဒါတွေက ငွေလိုမယ်။ လောလောဆယ် လုပ်နိုင်တာကို ဒီလောက် အချိန်ပုပ် မခံချင်တော့ဘူး။ ခေါင်းပြောင်းမှ အားလုံးပြောင်းမှာရယ်။
သင်တဲ့ ဆရာ ဆရာမတွေကို အရင် update လုပ်နိုင်မှကျောင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်းက ချောချောခြူခြူ ပြင်လို့ရမှာ
နိုင်ငံတကာက ပညာရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ပရောဖက်ရှင်နယ် ထရိန်နာကောင်းကောင်းကို ငှားလို့ပဲ ရရ နှစ်ရှည် နှစ်တို အကူအညီပဲတောင်းတောင်း အဲ့လိုများများလုပ်နိုင်ရင်တော့ ပိုထိရောက်မယ်
ဆရာဆရာမတွေကို စာဖတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်များများ ရှိအောင် အရင်ပျိုးထောင်ပေးရမယ်
လစာကောင်းကောင်းပေးလိုက်ရင်တော့ သူတို့အတွက် လည်း ကြိုးစားဖို့ အချိန်ပိုထွက်လာတာပေါ့
ပညာရေးလောကကိုတော့ တကယ်ပါ အားလုံးကို တန်းမြင့်စေချင်လှပြီ
မဟုတ်ရင် တိုင်းပြည်က နာပြီးရင်းနာနေရော မလိုအပ်ပဲ အချိန်တွေပုပ်တယ်
ဘာသာရေးနဲ့ ပညာရေးကိုလည်း လုံးဝခွဲထွက်စေချင်လှပြီ လုံးပေါင်းရောချလွန်းလို့
မယ်ပုရေ အမကတော့ သင်ရိုးအဓိကပဲ လို့ ထင်တယ်။ ဆရာတွေ ဆရာမတွေက ပြုပြင်ရ သိပ်ဆိုးမယ် မထင်ဘူး။ ပြီးတော့ အလုပ်တစ်ခုဟာ သိပ်စဉ်းစားလို့ မကောင်းဘူး။ သိတာကို ချက်ချင်းထလုပ်မှ လုပ်ဖြစ်တော့တာ။ စဉ်းစားရင် တွေဝေသွားပါရော။ ပညာရေး ဆိုပြီး သိပ်လည်း နက်နက်နဲနဲ မစဉ်းစားနဲ့။ သင်ရိုးထဲက အလိမ်အညာတွေ ထုတ်၊ ပြီးတော့ နိုင်ငံတကာက စာအုပ် ကူးထည့်လိုက် ။ လွယ်လွယ်လေးလို့ပဲ ထင်တယ်။
ဦးသိန်းစိန် စတက်တဲ့ နှစ်က စလို့ တစ်နှစ်တစ်တန်း သူငယ်တန်းက စလို့ ပြင်လာလိုက် ရင် ခုဆို ခြောက်တန်းအထိရောက်သွားလောက်ပြီ …..
ဦးသိန်းစိန် လက်ထက်မှာ ဘဝတွက်တာ ဘာသာရပ် ပြဌာန်းတာ သိပ်ကောင်းပါတယ်။
ပြောင်းဖို ့ဆိုတာကလဲ..ပြောင်းလို ့ကောင်းတဲ့အရာမှကောင်းတာပါ…သိပ်တော့မပြောတတ်ပါ..နိုင်ငံ ရေးတွေ ပါမှာစိုးလို ့
နိုင်ငံရေးဆိုတာ ပညာရေးပဲလေ ညီမရေ။
ပြင်ပအကာမှာတော့ အဲသည်- ပုံတိုပတ်စတွေ ၊ ယုတ်္တိမတန်တာတွေ၊
တန်ခိုးပြာဋိဟာတွေ၊ နတ်ပြည်ငရဲတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားမြဲပေါ့….
ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေမှာလဲ ဘာသာရေးတွေ အားကောင်းကောင်းနဲ့ ရှိနေတာပါပဲ..
ဘာသာရေးကို လူမှု့ရေးထဲ နိုင်ငံရေးထဲ ယူမလာဘို့ပဲ..။
ဘာသာရေးက တိုင်းပြည်ကို လူ့အဖွဲ့အစည်းကို မထိခိုက်စေတော့ဘူးလို့ ယုံကြည်တယ်..။
ဟုတ်။ အဲဒီသဘောသွားပါပဲ ဦးပါရေ။ တကယ့်တရားအဆီအနှစ်တွေ ရှိမှာပါ။ ရှိလို့လည်း ဒီလောက် နှစ်တွေရှည်ကြာ ခိုင်မြဲနေတာပါ။ အဲဒါတွေကသတ်သတ်၊ ယုတ္တိမတန်တော့တာတွေက သတ်သတ်။